Fivoriambe eran-tany IGLTA hatao ao Milan 26-29 Oktobra
Home » Lahatsoratra farany farany » LGBTQ » Fivoriambe eran-tany IGLTA hatao ao Milan 26-29 Oktobra
Associations News • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fanabeazana • Entertainment • Hospitality Industry • Zon'olombelona • Vaovao farany Italia • LGBTQ • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny Tanànan'i Milano dia manantena ny handray an'i IGLTA. Fotoana iray tsy manam-paharoa hitsenana ny fiarahamonina LGBTQ +, hery manosika sy tsara eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Milano dia hampiseho ny fiheverany tafiditra ao anaty, hampiasana ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana mba hanao traikefa miavaka Milanese ny fotoana rehetra amin'ny IGLTA.
Hiverina any Eropa ny International LGBTQ + Travel Association miaraka amin'ny hetsika praiminisiny 26-29 Oktobra 2022.
Ny fivoriambe, ny hetsika fanabeazana sy tambajotra voalohany ho an'ny fizahantany LGBTQ +, dia ho fivoriambe eropeana voalohany an'ny fikambanana hatramin'ny Madrid amin'ny 2014.
Tany am-piandohana dia natao ho an'ny taona 2020 ny hetsika, saingy voatery naverina naverina namboarina noho ny areti-mandringana COVID-19.
Ny International LGBTQ + Travel Association dia hitondra ny Fifanarahana maneran-tany faha-38 any Milan, 26-29 Oktobra 2022. Ny fivoriambe, ny hetsika fanabeazana sy tambajotra voalohany ho an'ny fizahan-tany LGBTQ +, no fivoriambe eropeana voalohany an'ny fikambanana hatramin'ny Madrid tamin'ny 2014. Ny hetsika dia tany am-boalohany napetraka tamin'ny taona 2020, saingy voatery naverina namboarina noho ny areti-mandringana.
“Faly izahay fa afaka mankalaza ny fiarahamiasa naharitra sy nahomby niaraka tamin'i Italia, ary mampiseho an'i Milan, tanàna mpandray vahiny LGBTQ + be mpiorina indrindra eto amin'ny firenena,” hoy i IGLTA Filoha / CEO John Tanzella. “Na dia nandiso fanantenana aza ny fanemorana, ny kaonferansa izay hiseho dia hisy dikany bebe kokoa ho an'ny toerana haleha sy ny maha-mpikambana antsika. Ny fivoriambe dia hiompana amin'ny paikadin'ny fandraharahana tafiditra sy ny fahafaha-mitantana tambajotra hanohanana ny fahombiazan'ny indostria amin'ny ho avy. ”
Ny tetikasan'i IGLTA any Italia dia niasa nandritra ny telo taona niaraha-niasa tamin'ny ENIT (Birao nasionalista mpizahatany italiana), ny Tanànan'i Milan ary AITGL (The Italian Association of LGBTQ + fizahan-tany), ary hatao ao amin'ny UNAHOTELS Expo Fiera Milano. Ny Fifanarahana Iraisam-pirenena dia misy ny mpividy / mpivarotra tsena, iaraha-miasa amin'ny Jacobs Media Group any UK, izay misy fanendrena tsirairay, ary koa fotoam-pianarana sy hetsika tambajotra hafa.
“Tsy niova mihitsy izahay tamin'ny fanolorantenanay hitondra IGLTA ho an'i Milan, "hoy i Maria Elena Rossi, talen'ny varotra sy fampiroboroboana, ENIT. “Amin'ny taona 2022, ireo mpanatrika ny IGLTA dia hahita fanavaozana bebe kokoa amin'ny tolotra fizahan-tany ataonay ary hamafisina bebe kokoa amin'ny traikefa kalitao izay mampivondrona an'i Milan sy ny manodidina. Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny tambajotran'ireo mpizahatany fizahan-tany sy mpitarika eritreritra no ahazoantsika antoka fa hisy hetsika mahomby. ”
"Manantena ny fandraisana ny IGLTA ny Tanànan'ny Milano," hoy i Luca Martinazzoli, Tale Jeneraly, Milano & Partners. “Fotoana iray tsy manam-paharoa hitsena ny fiarahamonina LGBTQ +, hery manosika sy tsara eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Milano dia hampiseho ny fiheverany an-tsehatra, hampiasa ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana mba hanao traikefa manokana an'ny MilanLe ny fotoana rehetra amin'ny IGLTA. ”
"Ity fivoriambe any Italia ity dia ho fanalahidin'ny fandrosoana miaraka amin'ny tontolon'ny fitsangatsanganana aorian'ny areti-mandringana," hoy i Alessio Virgili avy ao amin'ny AITGL. “Ny fampiroboroboana ny fitsangatsanganana LGBTQ + sy fampiantranoana ity hetsika ity dia fotoana tsy manam-paharoa sy raharaham-pampianarana ho an'i Italia sy ny indostrian'ny fizahan-tany eo an-toerana. Nahazo 2.7 miliara euro ny firenena avy amin'ny fitsangatsanganana LGBTQ +, ary faly izahay fa ny hetsika IGLTA dia hanome fitaovana ny orinasanay handray azy ireo tsara, hahafahanay manohy mampitombo ity tsena ity any Milan sy manerana an'i Italia. “
Hatramin'ny 1983, ny Fifanarahana Iraisam-pirenena an'ny IGLTA dia teo amin'ny lisitra tsy maintsy atrehana ho an'ny marika fitsangatsanganana liana amin'ny tsenan LGBTQ +. Vao tsy ela akory izay ny fikambanana dia nampiantrano fivoriamben'ny vondrom-pahombiazana nahomby tamin'ny alalàn'ny nanombohan'ny areti-mandringana. Ny Convention Convention IGLTA dia manome fahitana lehibe ho an'ny tanàna mpampiantrano miaraka amin'ireo matihanina momba ny fizahantany LGBTQ + manerantany, ao anatin'izany ny mpanolo-tsaina momba ny dia, ny mpikirakira fizahan-tany, ny influencer ary ny solontena avy amin'ny hotely sy toerana itodiana.